Shir amaanka looga hadlay oo ay Muqdisho ku yeesheen Beesha Murusade iyo Taliska AMISOM(Daawo Sawirada) - iftineducation.com
iftineducation.com – Shir looga hadlayey amaanka gobalka Banaadir ayaa waxaa maanta Muqdisho ku yeeshay taliska ciidamada AMISOM iyo masuuliyiin ka socday beesha Mursade oo uu horkacayey ugaaska beesha Mursade Ugaas Cabdullaahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracade.
Kulankan ayaa la sheegay in looga hadlay amaanka gobalka Banaadir maadaama beesha Mursade ay tahay beesha degaan ahaan u leh qeybo muhiim ah oo ka tirsan gobalka Banaadir qaarkoodna weli uu ku dambeeyo dagaalada ka dhexeeya Amisom, ciidamada dowladda iyo Alshabaab.
Masuuliyiintii Amisom ee halkaa ka hadlay waxaa ka mid ahaa taliyihii hore ee AMISOM Fred Mugisha, taliyaha cusub iyo saraakiil kale oo sheegay in beesha Mursade ay muhiim u tahay loogana maarmin ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Dhanka kale odayaasha beesha iyo masuuliyiintii kale ayaa iyana waxa ay dhankooda sheegeen in beeshu ay weligeed diyaar u ahayd nabad ku soo dabaalida gobalka Banaadir iyo guud ahaan dalka Soomaaliya, waxayna ay AMISOM kala hadleen inay wadashaqeyn dhow ay la yeelato dadka deegaanada ay ku sugan yihiin.
Waxa kale oo ay masuuliyiinta maanta kulanka ka qeyb galay ay qalad ku tilmaameen in shacabka ku nool degaanada beeshu ay degto lagu shabadeeyo Al-shabaab iyo wax aaney shaqo ku lahayn. isla markaana ay yihiin Shabaab fikir Soomaaliya oo dhan kor uga yimid.
Kulankan ayaa Ugaaska waxaa ku wehliyey masuuliyiin uu ka mid yahay xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxuloow oo hore wasiir uga soo noqday dowladda federaalka Soomaaliya.
Hotelada Ukrain Qiimo Kordhis Lagu Sameyn Doonin Intow Socdo Euro 2012